कोरोना क’हर चलिरहेको बेला भारतमा बस्ने नेपालीहरुलाई आयो अत्यन्तै खुशीको खबर ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > कोरोना क’हर चलिरहेको बेला भारतमा बस्ने नेपालीहरुलाई आयो अत्यन्तै खुशीको खबर !
admin May 4, 2021 May 4, 2021 समाचार	0
एजेन्सी । निषेधाज्ञाको समयमा पनि भारतबाट फर्किने नेपालीलाई सरकारले सीमामा नरोक्ने भएको छ। सरकारले यसअघि नै तोकेको २० वटा नाकामा हेल्थ डेस्क राखेर चेकजाँच गरिरहेको छ । केही नाकामा घरसम्म पुग्ने व्यवस्था गरेको हो। निषेधाज्ञा नभएका र सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा रहेका नाकाबाट आफैँ जाने भएपनि निषेधाज्ञा भएका जिल्लाले विशेष व्यवस्था गरेका हुन्।
सरकारले मुख्य नाका छलेर आउनेलाई भने रोक्ने गरेको छ। तर सरकारले नै तोकेका २० वटा नाकाबाट आउन रोकतोक नहुने स्थानीय प्रशासनले जनाएका छन्। सरकारले भारतबाट आउनेका लागि पशुपतिनगर, काकडभिट्टा, रानी, कुनौली, ठाडी,माडर, भिट्टा मोड, मलंगवा, गौर, वीरगञ्ज, महेशपुर, बेलहिया, तौलिहवा, कृष्णनगर, जमुनाह, सुरजपुर, गौरिफन्टा, गड्डाचौकी, झुलाघाट र दार्चुला नाका तोकेको छ।
,यी नाकामा स्थानीय तह, स्वास्थ्य कार्यालय र सुरक्षा निकायले हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरेका छन् । नाकामा रहेका हेल्थ डेस्कमा भारत बाट आउनेको स्वास्थ्य जाँच गरिने र त्यसपछि घर पठाउने गरिएको छ । पर्साका प्रहरी प्रमुख एसपी बेलबहादुर पाण्डेले वीरगन्ज नाकाबाट आउनेलाई नरोक्ने र घरसम्म पुग्ने व्यवस्था गरिएको बताए। उनका अनुसार स्थानीय यातायात व्यवसायीसँग समन्वय गरेर यसरी आउनेलाई घरसम्म पुग्ने गाडीको समेत व्यवस्था गरिएको छ। विस्तृतमा नेपालखबरमा छ ।
यी किशोरीले यस कारण गरिन आफ्नो कुमारित्व लिलामी…
रोमानियोमा बस्ने किशोरी अलेक्जेन्ड्र कैकरिनले जसै कु मा रि त्व लि लामीमा राखिन्, हङकङका व्यापारी अघि सरे । त्यसका निम्ति उनले २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य चुकाए । किशोरी १८ बर्षकी थिइन् । र, उनले जर्मनीमा आधारित सिन्ड्रेला एस्कार्ट एजेन्सीमार्फत आफ्नो कु मा रित्व लि ला मीमा राखेकी थिइन् । उनले त्यसको मूल्य, ८ लाख पाउन्ड राखेकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘म कु मा रित्व गु मा एर आफ्नो परिवारको लागि घर खरिद गर्न चाहन्छु ।’
२ वर्षीय बच्चा बोरा भित्रै राखेर चोर्दै गर्दा झापामा एकजना प’क्राउ (भिडियो हेर्नुस्)
बस स्टपमा अचानक चल्न थाल्यो ब्लु फिल्म, मानिसहरुले भिडियो भाइरल गरिदिए
३ दिनदेखि हराएका विर्तामोडका होटल व्यवसायी, जंगलमा मृ त फेला परे (भिडियो हेर्नुस्)